प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको फोटो देखाएर रु. ८० लाख ठगी (भिडियोसहित) « Swadesh Nepal
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको फोटो देखाएर रु. ८० लाख ठगी (भिडियोसहित)
‘सीधाकुरा जनतासँग’को ४६२ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गर्नुका साथै विभिन्न विषयमा सम्बन्धित ब्यक्ति÷निकायसँग प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरिएको छ ।
निम्न विषयमा रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ : १. प्रदेश सरकारका सचिवको गाडी सिक्ने रहर, ईन्धनमा पनि अनियमितता देखियो !
प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडास्थित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डाक्टर मुकुन्द प्रसाद पौडेलले हात सफाई गर्न भन्दै कार्यालय समयमा हेटौंडाको सनवुड कोलोनीमा प्रदेश ३–०३–०००१ झ ०००२ नम्बरको सरकारी गाडी सिक्दै थिए ।
सचिव पौडेलेले गाडी सिकेको भिडियो प्रत्यक्षदर्शीले न्यूज २४ को टिमलाई पठाएका छन् । उक्त भिडियोको बारेमा बुझ्न खोज्दा सचिव पौडेलले यताउता मिलाएर रिपोर्ट बजाउने त होलानी भन्दै ध”म्काए ।
उनले ‘तपाई मेरो पछि लाग्नु भएको छ । मैले चलाएको हो । के गर्नुहुन्छ गर्नुस् । अगाडि, पछाडि, ब्याक गरेर चलाएको हो, के गर्नुहुन्छ ? गर्नुस् । न्यूज २४ मा रवि लामिछानेलाई भनेर पठाउन पनि सक्नुहुन्छ । तपाईहरु यताउता मिलाएर रिपोर्ट बनाउने त होला नि ! हुन्छ गर्नुस् । म जे गरु, तपाईलाई के को टाउको दुखाई ?’ भन्दै ध”म्क्याएका छन् ।
२. औष धि कम्पनीहरुको मनलाग्दी मूल्य, मारमा उपभोक्ता- मानिसको आधारभुत आवश्यकता मध्येको एक हो औ षधि । तर, त्यही औष धिमा कम्पनीहरुले उत्पादन मूल्य भन्दा धेरै गुणा बढी मूल्य राखेर उपभोक्ता ठग्ने गरेको पाइएको छ ।
एउटै जेने टिक नाम र एउटै रो गका लागि प्रयोग हुनै औष धिको फरक–फरक मूल्य राखेर उपभोक्ता ठग्ने गरेको केही तथ्य हामीले जम्मा गरेका छौँ । जसमध्ये केही औष धिहरु यस्ता छन् ः
म्यु’प्रो सीन : छालाको एलर्जी हुँदा प्रयोग गरिने योऔषधिको देउराली जनता फ र्मास्युटिक ल्सले कम्पनी नाम म्युरोक नाम राखेर अधिकतम खुद्रा मूल्य १३० रुपैयाँमा राखेको छ ।
त्यही औषधिकोे आर्या फ र्माले मु पिर नाम राखेर १४५ रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ र एम्टे क मे डि सिन प्रालिले पनि एम–पावर नाम राखेर १४५ रुपैयाँमा नै बेच्दै आएको छ ।
३. युएनको कार्यक्रमको नाममा ठ गी गर्दै स्याङ्जाका बिष्णु पाठक- काठमाडौंमा रोजगारीको खोजीमा भौतारिरहेका युवाहरुलाई आर्कषक तलब÷सुविधामा वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर लाखौं ठ ग्नेको सूचीमा स्याङजा वालिङ नगरपालिका–१३ बाँयटारका बिष्णु पाठक पनि परेका छन् ।
उनले स्याङजा, पाल्पा, गुल्मी, नुवाकोट तथा काठमाडौंकै धेरै युवालाई युएन भिषामा कोरिया, जापान, जर्मन, अमेरिका पु¥याइदिने भन्दै २ लाखदेखि २२ लाखसम्म असुलेको पी डितहरुको गुनासो छ ।